फिटनेस | Makalukhabar.com
यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ब्लड प्रेसर लाे
चैत्र २, एजेन्सी । उच्च रक्तचाप भएजस्तै कतिपयलाई ब्लड प्रेसर लो हुने गर्छ । रक्तचाप न्यून भएका बिरामीहरुलाई पनि समान हेरचाह र जीवनशैली परिवर्तन आवश्यक पर्छ भन्नेमा धेरैलाई थाह नहुन सक्छ । तपाई वा तपाईको कोही आफन्तजन न्यून छ भने तपाईले निम्न उल्लेखित तरिका अप्नाउन सक्नुहुन्छ । मदिरा त्याग्ने र बढी पा... जारी राख्नुहोस...
तौल बढेर हैरान हुन्छ ? तौल घटाउन यी खानेकुरा खानुस्
फाेटाेः गुगलफागुन २९ । लसुन एक प्राकृतिक एन्टी बायोटिक औषधि हो । यसले सुगरलाई नियन्त्रित गर्ने काम गर्छ । लसुनले शरीरमा ती हर्मोनलाई सक्रिय गर्ने काम गर्छ जसले बोसोलाई जम्मा हुन दिँदैन । आफ्नो खानामा लसुनलाई समावेश गरेर हेर्नुहोस् ।—ग्रीन टीमा ‘क्याटेचिन्स’ नामक यौगिक तत्व पाइन्छ जसले शरीरमा अतिरिक्... जारी राख्नुहोस...
'फिटनेस क्रेज पनि एक खतरा हो !'
फागुन ४, काठमाडौं । इन्स्टाग्राममा यस्ता धेरै प्रयोगकर्ता छन्, जसबाट लाखौँ मानिसहरु प्रभावित छन् । ती मानिसहरु दैनिक नयाँ स्वास्थ्य टिप्स दिन्छन् र मानिसहरुलाई कसरत गर्न सिकाउँछन् ।उनीहरु जस्तो बन्न र देखिनका लागि धेरै मानिसहरु पसिना बगाउँछन् र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तस्वीर शेयर गर्छन् ।इन्स्टाग्राम... जारी राख्नुहोस...
खाली पेटमा खतरनाक हुनसक्छ ‘ग्रीन टी’ !
फागुन १, काठमाडौं । पेटको बोसो घटाउनको लागि महिलाहरु प्रायः ‘ग्रीन–टी’ पिउने गर्छन् । तर एक वा दुई कपभन्दा बढी ग्रीन–टीले शरीरलाई फाइदाभन्दा बढी नोक्सान गर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । धेरै वटा देशमा गरिएको अनुसन्धानमा ग्रीन–टीमा भएको क्याफिनले भोक नियन्त्रण गरे पनि यसले शरीरमा अन्य समस्याहरु पैदा गराउँछ... जारी राख्नुहोस...
यस्ता व्यक्तिका लागि अतिआवश्यक योग
माघ १६, काठमाडौँ । योग सन्तुलित तरिकाले एक व्यक्तिमा निहित शक्तिमा सुधार या उसको विकास गर्ने शास्त्र हो। यसमा पूर्ण आत्मानुभुति पाउनका लागि इच्छुक मानिसहरूका लागि साधन उपलब्ध गराउँछ। स्वस्थ्य, निरोगी, दीर्घजीवि कसरी हुने ? यसको सबैभन्दा सरल र प्राकृतिक विधी हो, योग ।न हामी उपचार गरेर निरोगी हुन्छौं,... जारी राख्नुहोस...
दैनिक आधा घण्टा व्यायाम गरे उमेर बढ्ने
माघ ५ । वास्तवमा स्वस्थ शरीर नै मानिसको सवैभन्दा ठूलो धन हो । शरीर स्वस्थ राख्न मानिसहरुले अनेक उपाय अपनाइरहेका हुन्छन् । घण्टौं व्यायाम गर्नेदेखि विभिन्न किसिमका डाइट खाने गरिन्छ । तरपनि मानिसले आफ्नो जीवनशैलीलाई स्वस्थ बनाउन सकिरहेको हुँदैन ।क्यानडामा हालै भएको एक अध्ययनले घन्टौं व्यायामको साटो दै... जारी राख्नुहोस...
मानसिक तथा शारिरमा स्फूर्ति ल्याउन गर्ने गराैँ जुम्बा डान्स
पुस ३ । शरीरको अनावश्यक बोसोलाई पगालेर, तौल घटाएर फिट राख्ने चाहना सबैलाई हुन्छ । स्वस्थ रहनको लागि सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निन्द्राका साथ साथै नियमित व्यायाम पनि अति आवश्यक हुन्छ । नियमित व्यायामका लागि पनि विभिन्न तरिकाहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।मर्निङ्ग वाक। जिम, योगा जस्ता विभिन्न तरिकामध्ये सबैभ... जारी राख्नुहोस...
यसरी अण्डाकाे सेवन गरे माेटाेपन घट्ने
पुस ८ । अण्डा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा हो र यसले मानिसको जिउलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पूराउँछ । बिभिन्न खाले पोषक तत्वले भरिपूर्ण हुनुका साथै क्याल्सियम, आइरन तथा प्रोटिनजस्ता तत्वको भण्डारको रुपमा रहेको अण्डाको सेवनले सरीरलाई चाहिने दैनिक पौष्टिक तत्वको भरणपोषण गर्न सहयोग पूराउँछ ।अण्डामा भिटामिन ए, फो... जारी राख्नुहोस...